2 VaKorinde 12:1-21
12 Ndinofanira kuzvirumbidza. Izvi hazvibatsiri; asi ndichapfuurira kutaura pamusoro pezvakaratidzwa zvinoshamisa kwazvo+ nezvakazarurwa zvaShe. 2 Ndinoziva nezvomumwe munhu akanga ari pamwe naKristu uyo, makore gumi nemana apfuura—kuti zvakaitika mumuviri here ini handizivi, kana kuti zvakaitika musiri mumuviri, ini handizivi; Mwari ndiye anoziva—akatorwa+ akadaro akaendeswa kudenga rechitatu. 3 Chokwadi, ndinoziva munhu akadaro—kuti zvakaitika mumuviri here kana kuti zvakaitika musiri mumuviri,+ ini handizivi, Mwari ndiye anoziva— 4 kuti akatorwa akaendeswa kuparadhiso+ akanzwa mashoko asingatauriki ayo asingabvumirwi nomutemo kuti munhu ataure. 5 Ndichazvirumbidza pamusoro pomunhu akadaro, asi handingazvirumbidzi pamusoro pangu, kunze kwezvinhu zvine chokuita nokusava nesimba kwangu.+ 6 Nokuti kana ndichida hangu kuzvirumbidza,+ handizovi noupenzi, nokuti ndichataura chokwadi. Asi handiiti izvozvo, kuti pasava nomunhu anondirumbidza kupfuura zvaanoona kuti ndizvo zvandakaita kana kuti zvaanonzwa kubva kwandiri, 7 nokuda kwezvakazarurwa zvakawandisa chete. Naizvozvo, kuti ndirege kunzwa ndanyanyokwidziridzwa,+ ndakapiwa munzwa munyama,+ ngirozi yaSatani, kuti irambe ichindirova, kuti ndirege kunyanyokwidziridzwa. 8 Nokuda kwaizvozvi ndakateterera Ishe katatu+ kuti ubve; 9 asi chokwadi iye akati kwandiri: “Mutsa wangu usina kukodzera kuwanwa wakakukwanira;+ nokuti simba rangu riri kuitwa kuti rive rakakwana mukusava nesimba.”+ Naizvozvo, ndingasva zvangu ndazvirumbidza nomufaro mukuru kwazvo pamusoro pokusava nesimba kwangu,+ kuti simba raKristu rirambe riri pamusoro pangu setende. 10 Naizvozvo ndinofara nokusava nesimba, nokutukwa, nokushayiwa, nokutambudzwa nezvinetso, nokuda kwaKristu. Nokuti pandinenge ndisina simba, ndipo pandiine simba.+ 11 Ndava benzi. Makandigombedzera+ kuti ndive akadaro, nokuti ndaifanira kunge ndakarumbidzwa nemi. Nokuti handina kuva munhu akaderera kuvaapostora venyu vakanaka kwazvo+ kana pachinhu chimwe chete, kunyange zvazvo ndingasava chinhu.+ 12 Chokwadi, zviratidzo zvomuapostora+ zvakabudiswa pakati penyu nokutsungirira+ kwose, uye nezviratidzo nezvishamiso nemabasa esimba.+ 13 Nokuti makapfuurwa pachii nedzimwe ungano dzose, kunze kwokuti ini handina kukuremedzai?+ Ndikanganwireiwo nomutsa chinhu chakaipa ichi. 14 Tarirai! Iyi inguva yechitatu+ yandagadzirira kuuya kwamuri, asi handizokuremedzei. Nokuti handisi kutsvaka zvinhu zvenyu,+ asi imi; nokuti vana+ havafaniri kuchengetera vabereki vavo pfuma, asi vabereki ndivo vanofanira kuchengetera vana vavo.+ 15 Ini ndichafara kwazvo kushandisa zvinhu zvose uye kushandiswa zvizere nokuda kwemweya yenyu.+ Kana ndichikudai kwazvo, ndinofanira kudiwa zvishoma here? 16 Asi kunyange zvingaita sezvakadaro, handina kukuremedzai.+ Kunyange zvakadaro, munoti, ndakanga ndiine “manomano” uye ndaka“kunyengerai.”+ 17 Ko pane munhu chero upi zvake pane vaya vandakatumira kwamuri wandakashandisa kukudyeredzerai here? 18 Ndakakurudzira Tito uye ndakatumira hama yacho pamwe chete naye. Tito akambokudyeredzerai here?+ Hatina kufamba nepfungwa dzakafanana+ here? Hatina kufamba mumakwara akafanana here? 19 Nguva iyi yose mave muchifunga kuti tanga tichizvidzivirira pamberi penyu here? Tiri kutaura tiri pamwe naKristu tiri pamberi paMwari. Asi, vadiwa, zvinhu zvose zviripo kuti imi muvakwe.+ 20 Nokuti ndinotya kuti zvimwe pandinosvika,+ ndingakuwanai musina kuita sezvandingada uye kwamuri ndingasava ndakaita sezvamungada, asi, panzvimbo paizvozvo, zvimwe pangava nokupopotedzana, godo,+ kutsamwa, kukakavadzana, kunyeyana, makuhwa, kuzvitutumadza, nyonganyonga.+ 21 Zvichida pandichauyazve, Mwari wangu angandininipisa pakati penyu, uye ndingachema pamusoro pevazhinji vaya vakambotadza+ asi vasina kupfidza pakusachena kwavo noufeve+ nokusazvibata+ zvavakaita.